Umhlaba kaGoogle wokusetyenziswa kweCadastre? -Geofumadas
Google Earth ukusebenzisa iCadastre?
NgoJulayi, 2007 ArcGIS-ESRI, cadastre, Google umhlaba / imephu
Ngokwamanye amagqabantshintshi kwezinye iiblogi, kubonakala ngathi ubungakanani bukaGoogle Earth buya kudlula ngaphaya kweenjongo zokuqala zokwenziwa kwewebhu; Injalo imeko yezicelo ezijolise kwindawo ye-cadastre. I-Diario Hoy, yesixeko sase-Mar de Plata ipapasha ityala, apho iziswa kwinqanaba lowiso-mthetho ukulungiselela iinjongo ze-georeferencing kunye nexabiso lokuxabisa.
Ngokubanzi, imithetho yoomasipala okanye iiholo zeedolophu isungula ingqokelela yerhafu yokuthengiswa kwezindlu njengamandla erhafu avumela ukuba bafumane izibonelelo, ezinokuphinda zenziwe kwiiprojekthi eziphucula umgangatho wobomi babemi bayo. Ukulungiselela le nto, amaxabiso awaziwayo "e-cadastral" ayasetyenziswa, kwaye nangona kukho iindlela ezahlukeneyo zesicelo sabo, injongo kukuba umnini wepropathi ahlawule irhafu ngokulinganayo "kwixabiso" lepropathi ngeendleko umasipala acacisa ukubonelela ngeenkonzo zoluntu nanjengegalelo ekuzimele geqe kwinkalo yokuzinza.
Ii-asethi ezingachazwanga zihlala zibangela eyona nto inzima ngexesha lokusetyenziswa kwezibophelelo zerhafu kwaye kule ndawo iGoogle Earth yenzelwe ukuba isetyenziselwe ukubona ukuphuculwa kwedolophu kunye nezityalo ezisisigxina. Kuyabonakala ukuba isixhobo esiseMar de Plata sijolise kuqikelelo lwerhafu kuphela, hayi ukwenziwa kovavanyo okanye inkcazo yejometri yeepropathi kuba kusaziwa ukuba imifanekiso kaGoogle Earth inenqanaba eliguqukayo ukungacaciswanga kuba imodeli yomhlaba esetyenziselwa ukuthotyelwa kwayo ifakwe ngumgangatho weendawo zokulawula; Ngale ndlela, iindawo ezikulo mhlaba athuthukileyo zinemivuzo kunye nenani lamaphuzu e-geodesic kunye nokusetyenziswa "ngokubanzi kuluntu".
Umthetho ohlongozwayo uqulethwe kwelinye lamacandelo alo mhlathi ulandelayo:
"Xa ngenxa yezizathu ezingahambelani nesikhokelo cadastre kukho izinto indawo (izindlu okanye emakhayeni) kusekho inxalenye ipasile cadastral ezingamelwanga kwisicwangciso esivunyiweyo nabhaliswe phantsi komthetho ngoku, umzimba enjalo individualize, irejista kunye nabele izinto Estate ngokusebenzisa iindlela ezizezinye kwemida indawo ukuqinisekisa amanqanaba ukuchaneka, ukuthembeka kunye nokulingana okulinganayo nemilinganiselo "
Isiphakamiso uba umdla (yingozi Nngokobuchwepheshe) kuba umntu akhuphe amatikiti kunye neerisithi, sezibona de iinkqubo zezolawulo nezobugcisa esebenzayo ngokubanzi yi-afidavithi, inkqubo yobugcisa isenokuba neSingqinisiso irhafu yepropati, ixabiso yenzelwa lomhlaba, ukuchongwa kokusetyenziswa kunye nokubala kweerhafu ngokubhekiselele kuphuculo okanye izityalo ezisisigxina.
Nanini technologies ulwazi zibe ifikeleleke ngakumbi yaye lula ukusingatha, Kakade ingozi phezulu, njengoko kwenzekayo xa bonke abantwana bafunda ukusebenzisa ArcView isigqibo akuyomfuneko ukuba bafunde izinto zokuzoba. Ngoku ubani owaziyo ukusebenzisa iGoogle Earth uya kuthi akufuneki ukuba azi geodesy?
Ekugqibeleni, ukusetyenziswa kwedatha njengalezo zinikezelwa yiGoogle Earth zenza isisombululo esikhulu kumazwe apho kungekho mfanekiso wesathelayithi okanye i-orthophoto yakutshanje; Amaxesha amaninzi kuba iiarhente zikarhulumente zibuthathaka ekunikezeleni ngezi nkonzo koomasipala. Ke ukuba kuziwa ekuchongeni amadama okubhukuda, izakhiwo ezitsha, izindlu zezindlu okanye iindawo zokulima ngokusisigxina, ngokuqinisekileyo uGoogle Earth angangumlingani omkhulu. Okufanayo akunakuthethwa ukuba ulwazi luya kusetyenziselwa iinjongo zomthetho okanye idatha ixutywe kunye nophando oluchanekileyo ngaphandle kokwenza umahluko olumkisa abasebenzi abatsha kutshintsho lukarhulumente.
ArcView Blog Umhlaba ka-Google
Post edlulileyo«Ngaphambilini Amanyathelo oLawulo lweCastastral Management
Post Next Kutheni ezinye iiblogi zeCartesian zishiyweOkulandelayo »
Uphendula u "Mhlaba kaGoogle ngokusetyenziswa kweCadastre?"
Injongo kukuba ukhangele uchwepheshe, kuba ilizwe ngalinye linemiqathango eyahlukeneyo yomthetho malunga nokulungiswa komhlaba.
july covello uthi:
Ndithenge ipropathi, i-6 kwiminyaka eyadlulayo, kwaye ndayibhala i-1 kunyaka ophelileyo, ngoku ndifumanise ukuba umnini wangaphambili wayeqalise ukwahlula-hlula, .... ungakhumbuli ukuphonononga ukuqala kwakho,, yintoni ekufuneka ndiyenzile ukuba ndiqhubeke nayo, kuba ndinomdla wokuyihlulahlula , enkosi
Ndicinga ukuba ngenjongo yokucwangcisa ilungile, kodwa kwimisebenzi enzima esi sixhobo asikho ngokwenene, kodwa kuba kukho izixhobo kunye nedatha ekhethekileyo.
Ukunika umzekelo, GoogleEarth iye orthorectified umfanekiso satellite okanye umthombo nokuba orthophoto izithombe zasemoyeni pixel kwimitha nye luze lube sezantsi ngakumbi, ngokucebisa impazamo isalamane iphiramidi ebonisa malunga 1.50 eemitha, kodwa iziphoso elililo lwe georeferencing yokuhamba ngu 30 metres. lo ngumzekelo
E-Spain, i-cadastre isebenzisa iSigpac (http://sigpac.mapa.es/fega/visor/) ukuba ndicinga ukuba ingasetyenziswe ngokomthetho xa ivela kubulungiseleli.
Kwimbali yokuchaneka kwayo kufuneka ibe mkhulu, ephakanyisiwe kwasekuqaleni kwezi njongo.
Oko kubonakala apha njengobuchwephesha bobuchwephesha akukho nto ngaphandle koko sikubiza eArgentina "A Patch", Oko kukuthi, isisombululo esinobungozi kwimeko ekule meko kukungabikho kophando lwe-cadastral kwiphondo laseBuenos Aires. Ndiyakholelwa ekubeni isisombululo esivelisiweyo asikho nzulu kwaye asiphuhliswanga ngokwendlela ebhaliweyo yomthetho we-cadastral othi: "...
Ngapha koko, iGoggle Earth inoyilo olubeka phambili ukuboniswa kohlobo oluthile lolwazi oluthathwe ngomhla ongaziwayo, kwiimeko ezingaziwayo kwaye ngubani owaziyo enye into. Ayisiyo imveliso enokuthathwa njengobugcisa. I-cadastre nawo wonke umthetho oqinisekisa ukuba ingqokelela kunye nentlonipho yamalungelo ommi ifuna ukusetyenziswa kweendlela ezisemgangathweni kunye nemigangatho ehambelana nokuqokelelwa kolu hlobo lolwazi hayi i "chantada" (IArgentina: ukuphuculwa kobuchule) .
Goggle Umhlaba sisixhobo esikhulu nesilungileyo kakhulu ukuba sisetyenziswe kwimeko eyakhiweyo. Ukongezwa kobuchule bayo kumhlaba ongahambelani nawo ngabantu abangaqeqeshwanga ngokukhawuleza kukhokelela kumatyala angenangqondo ngokupheleleyo anje ngala achazwe ngentla kuleyo «ukwazi ukusebenzisa iArc-View akuyomfuneko ukwazi ikhathuni.
UJosé Ramón Sánchez uthi:
Ngemiba ephakanyiswe kwinqaku kunokwenzeka kuphela xa ulwazi luyafumaneka, phezulu-resolution, ezifana niqonda ngokwenu Google Earth, ngeenjongo yemephu ungcono. Ngaphezu koko, ulwazi, nangona luncedo, akukho ngexesha lenene, oku kwenza ulungiso yempahla eshukumayo kunokwenzeka akufunekanga elibhaqiweyo, kwaye inculisve ukutshintsha ukusetyenziswa komhlaba, apho ubhaliso umsebenzi catastra Kungaqondakali. Nangona kunjalo, ngokwemiqathango jikelele, iingcamango ezichazwe kwinqaku layo zincedo kakhulu. Imibuliso Jose uRamon Sánchez, isimemezelo, Venezuela, Edo. Tchira